The Pyi Myanmar Journal Interviews Joshua Chit Tun on Education and Family - The #rebelsenator - .LA
Highlights (In Burmese)
The Pyi Myanmar Journal Interviews Joshua Chit Tun on Education and Family
Published by May Phyo Khaing on March 29, 2016 at 1:58am in Highlights (In Burmese)
Joshua Chit Tun နှင့် ပြည်မြန်မာဂျာနယ် အင်တာဗျူး
၁။ မြန်မာပြည် မှ ကလေးတစ်ယောက် မွေးစားမယ့် အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် အဲဒီအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို သိချင်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်မို့ အဲဒီလိုလုပ်ချင်ရတာပါလဲ ။ အကယ်၍ မွေးစားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ကလေးမျိုးကို မွေးစားချင်တာလဲ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီ ကလေး (သို့) ကလေးမ ကို ဘယ်လိုမျိုး ပြုစုပျိုးထောင်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်း သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ရောက်တဲ့တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော် မြန်မာပြည်က မိဘမဲ့ ကလေးတစ်ဦးကို မွေးစားမှာပါ၊ နားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံ သင့်မှာရှိနေရပါမယ်၊ ပြုစုပျိုးထောင်သွားဖို့အတွက်ကတော့ ကျွန်တော်မွေးစားလိုက်တဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ မျက်လုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့အတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးရလဲ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပိုပြီးတော့ နားလည်လာမှာပါ။ ကလေးငယ်တွေဆီကနေ ပြန်လည်သင်ယူနိုင်တာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ အဲလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အားအင်တွေ ကျွန်တော့မှာ အပြည့်ရှိနေတာကို ကျွန်တော် ခံစားလို့ရနေတယ်၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖေ့ ကိုယ်စား ကျွန်တော့်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အန်ကယ် လူဖြူကြီးရဲ့ကျးဇူးတွေအများကြီးရှိနေ လို့ပေါ့။ မိဘမဲ့ကလေးငယ် တွေကို ကူညီပေးဖို့ ပဲ့ကိုင်ရှင် အုပ်ထိန်းသူအမည် နဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခု တည်ထောင်သွားဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာတွေ ကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုတဲ့ တာဝန်ယူမှုတွေ လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော် ရှင်းမပြနိုင်တဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော့်ကလေးတွေကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ပြုစုပျိုးထောင် သွားမှာပါ။ အသက်ငယ်စဉ် မှာတော့ သူတို့လေးတွေကို မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေရဲ့ အကြောင်းသူတို့စိတ်ထဲမှာ ကိန်းဝပ်သွားအောင် ပျိုးထောင်ပေးရမှာပါ။ နောင်တစ်ချိန်မှာ သူတို့လေးတွေဟာ ချစ်ထွန်း အုပ်စု (သို့) ချစ်ထွန်း ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီမှာ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်းတွေကို စီမန်ခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ အသိပညာတွေ တတ်မြောက်နေရမှာပါ။ အဲ့ဒီတာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သမျှ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာပါ။
သူတို့ဟာ ပျက်စီးသွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပဲ့ပြင်မောင်းနှင်မှုလေးတွေတော့ ရှိနေမှာပါ။ သူတို့တွေ မှန်ကန်တာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ နဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီအချက် နှစ်ချက် က အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒီ အချက်က ပဲ သူတို့တွေကို စည်းကမ်း ရှိရှိ နေထိုင်တတ်ဖို့ သင်ကြားသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်စိတ်အပူဆုံးကတော့ သူတို့တွေဟာ မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲ အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာကို ပါပဲ။
၂။ Joshua မှာ ပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်း ရှိတစ်ခုရှိတယ်လို့ သိထားပါတယ်၊ ဆရာ့ အနေနဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဒါမှမဟုတ် ပေးချင်တဲ့ အကြံဥာဏ်တွေများရှိပါသလား။ ဆရာလည်း သိမှာပါ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေမှာ ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ရောက်သူကရောက်သလို တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာကော Joshua အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ၊ နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေအပေါ်မှာကော ဘာများပြောချင်တာရှိပါသလဲ။
မြန်မာလူငယ်များအတွက် ပညာရေး နဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာတွေ (proposals) ကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ အဲဒီအဆိုပြုလွှာတွေမှာ အခုမေးထားတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေ၊ ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ဖန်တီးလှုံ့ဆော်ပေးမယ့် အရင်းအမြစ်တွေကို အသားပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာတော့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပညာပေးမယ့်သူတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော့ကို ဒီ http://www.STUDENTdirectInternational.info/ မှ တဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
STUDENTdirect Charitable Foundation,http://www.mySTUDENTdirect.com/ ) ဟာ လည်း ဒီ ဖြစ်စဉ် ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပါပဲ။ နည်းပညာ ကတော့ ပညာရေး စံချိန်စံညွှန်း မြင့်မားလာစေဖို့နဲ့အားလုံး လက်လှမ်းမီတဲ့ ပညာရေးဖြစ်ဖို့ အဓိက ပဓာန ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိမှာ ပညာရေးက ဘယ်လိုပြန့်ပွာနေလဲ ဆိုတာကို လေ့လာနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကျွန်တော့်ရဲ့အဆိုပြုလွှာမှာ အဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတော့ မပါသေးဘူးခင်ဗျ။
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့အုပ်စုများဟာ ပညာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာကျလာပါလိမ့်မယ်။ http://www.ChitTunGroup.info/ မှတဆင့် ကျွန်တော်ပိုမိုပါဝင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်း၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေအတွက် ပြောရရရင် သူတို့ရဲ့ စွမ်းအား၊ အားသွန်ခွန်စိုက်မှုနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်များကို လေးစားမိပါတယ်။ သူတို့တွေကို စုစုစည်းစည်းဖြစ်စေချင်ပြီး ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာတွေအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့စိတ်ကူးပြီး အိပ်မက် မက်နိုင်ရုံသာ တတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို သူတို့တွေဟာ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။ သူတို့တွေကပဲ ကျနော့်ကို ပိုမိုကြိုးစားစေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးနေပါတယ်။ အထက်တန်း ကျောင်းသားများဟာလည်း လူထုလုပ်ရှားမှု (Initiating Community Action (ICA), http://www.InitiatingCommunityAction.info/) တွေမှာ ပါဝင်သင့်သလို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများကတော့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ့်ခေါင်းဆောင် (NextGenLeaders, http://www.NextGenLeaders.info/) မှာပါဝင်သင့်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကလေးငယ်များရဲ့ ရွှေရောင်အနာဂတ်ဆီ ရောက်ဖို့ရန်အလို့ငှာ စည်းကမ်းရှိရှိ ပြောင်းလဲလာစေရေးအတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ အဆိုပြုလွှာ အကြံပြုချက်ကို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကြီးများ၊ အမေရိကအခြေစိုက် ဖောင်ဒေးရှင်းများ၊ ပညာရေး ကိုမြှင့်တင်ပေးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အနုပညာရှင်များ ကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ထိုနည်းတူ မီဒီယာများမှ သတိပြုမိသွားသကဲ့သို့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံတဲ့ အုပ်စုများမှာလည်း နည်းပညာ နဲ့ ပညာရေး အပေါ် ပိုမို အာရုံ စိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
ပညာရေးပြုပြင်လဲမှု (education reform) အတွက် မြန်မာနဲ့ အမေရိက သာမက အရှေ့တောင်အာရှ မှာ ရှိတဲ့ အခြားနိုင်ငံများအပေါ်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ သုတေသနတွေလုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ အဆိုပြုလွှာတွေအတွက် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက်တော့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အဲဒီနည်းဗျူဟာတွေကို လိုက်နာပြီး အဆိုပြုလွှာရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များကိုရောက်ဖို့ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုတိုင်းမှာ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်အားထုတ်မှုတွေရှိနေတာ ကြောင့် ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်ကလည်း အဖြေရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊
၃။ Joshua အနေနဲ့ အမေအကြောင်း ပြောတာ သိပ်မကြားဖူးသေးဘူးနော်၊ သူမ ကရော မြန်မာ ကပဲလား ဗျ၊ ကျေှးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါအုံး နောက်ပြီးတော့ Joshua အသက် ၅ နှစ်မပြည့်ခင်အထိ ဒီမှာနေသွားပြီး အတူနေတဲ့ အန်တီကလည်း မြန်မာဖြစ်ပြီးတော့ ဘာ့ကြောင့် မြန်မာစကား မပြောတတ်တာလဲ
ကျနော့်အမေဟာ ငယ်ရွယ်လှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ အမေဟာ အခုဆို အသက်၄၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူမ အသက်၁၆ နှစ်မှာ ကျွန်တော့ကို မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့ကို သူမမွေးနေ့မတိုင်မီ၂ ပတ်အလို သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ မွေးခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် မွေးနေ့လက်ဆောင် ဖြစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အမေ က ရှမ်းပြည်နယ်ကပါ အမေ့ရဲ့အဖေကတော့ ထိုင်းကပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ထိုင်းရိုးရာ အစားအစာ ရော မြန်မာအစားအစာပါ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ အမေ ဟာ ကျနော့်အတွက် ဆန်းကြယ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။ အမေ့မိသားစုအကြောင်းကိုတော့ သိပ်မသိပါဘူးဗျ။ အမေဟာ ပညာမတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုပေမဲ့ ကောင်းစွာကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေဟာ ရွာမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။ အမေ့အတွက်ပဲ အမေ့ကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ အခုလိုမျိုး ရင်ဆိုင်ကြိုးစားနေတာပါ။
၄။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာဖြစ်သေးလား၊ ဒီမှာကော အမျိုးတွေရှိသေးလား၊ မိသားစုကရော အမျိုးတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိသေးလား၊ Joshua ကကော လူလွတ်လား အိမ်ထောင်နဲ့လား၊ တကယ်လို့အိမ်ထောင်ရှိရင် ဇနီးအကြောင်းလေး ပြောပြပါဦး တကယ်လို့ လူလွတ်ဆိုရင်လည်း ပတ်သက်ဆက်စပ်မှုလေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးပါဦး
အဖေ့ဘက်ကမိသားစုဆွေမျိုးတွေကတော့ မြန်မာပြည်မှာ မနေထိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်ကို သွားလည်ပတ်ဖြစ်ရင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း တွေနဲ့ မြန်မာသံစဉ် သီချင်းတွေကို နားထောင်ရရင် သိပ်ပြီး ကြည်နူးမိမှာပါ။
ကျနော်က လူလွတ်တစ်ယောက်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့လျှောက်လှမ်းနေလို့ပါ။ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းကတစ်ဆင့် လူသားဆန်မှုကို ပိုမိုတိုးပွား လာခြင်းအားဖြင့် ကျနော်က အမြဲတမ်း ချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကို ဖြစ်စေတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော့အနေနဲ့ ရေရှည်၊ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်တဲ့ ရင်းနှီးပတ်သက်ဆက်စပ်မှုတွေ ဦးစားပေးခြင်းတွေ ခွဲခြမ်းမထားပါဘူး၊ အဲ့ဒါကပဲ ကျနော့် ကို ပိုမို အာရုံစူးစိုက်စေ ဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ကိုးရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့ အန်နီမေးရှင်းဇာတ်ကားတွေလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ ကျနော့် အားလပ်ချိန်တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်နေခြင်းဟာလည်း အကြောင်းအရာတွေထဲက တစ်ခုပေါ့ဗျာ။
၅။ Joshua ရဲ့ မိဘတွေက ခွဲနေကြတာလား
အဖေက ကျွန်တော် ၈နှစ်သားကတည်းက ဆုံးပါးသွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့အဖေ ရဲ့မိသားစုက ကျွန်တော့ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမေကိုတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ သွားတွေ့ပါတယ်။
၆။ အမှီအခိုကင်းတဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဆိုတာကရော ဘယ်လိုိမျိုးလဲ Joshua ၊ အခြား တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုကော Joshua အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး အားပေးနိုင်မယ် လို့ထင်ပါသလဲ၊
အမေရိကနိုင်ငံရေး စနစ် မှာ ပါတီ နှစ်ခု ရှိတယ် အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော့အမြင်ယူဆချက်တွေ က ဘာတွေလည်းဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ထားရတယ်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ ရပ်တည်တော့မယ်ဆိုရင် အဓိကသော့ချက်ကို အရင်းအမြစ်တွေက ဘယ်ကနေလာသလဲဆိုတာပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ကျနော့်မှာ ဒီလို (http://www.JBMCommunity.info/) အဖွဲ့မျိုးတွေရှိပြီး ကျနော့်ကို အကြံဥာဏ်ပေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ပေးနေနိုင်တာပါ။
သူတို့ရဲ့ အကြံပေးမှုက ပိုမိုထိရောက်ပြီး ကျနော့်ကို တစ်သီးပုဂ္ဂလ အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပါတီကိုယ်စားလှယ် အကြိုရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွင်းမှာတော့ ကျွန်တော့် ဘယ်နေရာမှာ ရပ်တည်နေမလဲဆိုတာ့တော့ မသိသေးပါဘူး။
ကျွန်တော်ဟာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်(#NextGenLeaders)တွေ မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဒီလူငယ်အဖွဲ့အစည်း (http://www.YoungINC.LA/) နဲ့ စေ့စပ်သေချာစွာ ညှိနှိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ အယူအဆ သဘောတရား၊ ပုံစံတွေက ကျနော့် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကို အောင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်။ စည်းကမ်းရှိမှုတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ သင့်မှာ ရှိသမျှ အရာအားလုံးနဲ့ စွန့်စားရပါတယ် သို့ပေမယ့် ကျနော့်အတွက်တော့ အဲလိုလုပ်ရတာကို နှစ်သက်ပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်က ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ လိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်လို့ပါ။ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်နိုင်ဖို့ ပြောင်းလဲခြင်းကတော့ လိုအပ်တာပဲ။ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ တွေးထားတဲ့တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေဟာ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ JBM Community ကတော့ သူတို့ဆီကနေ အဲလိုကြားရမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Joshua Chit Tun, #rebelsenator
Tags: international media, interviews, #rebelsenator
May Phyo Khaing March 30, 2016 at 6:51am
Also thanks for your kind words my bro! :-)
Chairman Brian Antezana > May Phyo Khaing March 30, 2016 at 6:52am
It is my pleasure to support those who are helping the world.
May Phyo Khaing March 30, 2016 at 6:26am
Hahaha! Bro Brian,
Don't feel like that. I always admire your working skill.
Chairman Brian Antezana > May Phyo Khaing March 30, 2016 at 6:35am
Well, it is always nice to be appreciated.
Chairman Brian Antezana March 30, 2016 at 4:42am
I am gettingalittle jealous, May. Your submissions are way more popular than mine. ;')
I believe we need to fight to restore our faith in humanity.
© 2020 .LA Powered by